Filimka Super 30 oo fiidkan sare u kac wanaagsan sameeyay maalintiisa kowaad ganacsi wanaagsan ka filo | Filimside
Home BOX OFFICE Filimka Super 30 oo fiidkan sare u kac wanaagsan sameeyay maalintiisa kowaad...
Filimka Super 30 oo fiidkan sare u kac wanaagsan sameeyay maalintiisa kowaad ganacsi wanaagsan ka filo
Superstar Hrithik Roshan filimkiisa Super 30 ayaa maanat subaxdii hore si dhex dhexaad ah ku furmay oo ay ahayd 20% ilaa 25% balse xiligii duhurka Hindiya ayuu sare usii kacay wuxuuna gaaray 30% ilaa 35% taasi oo muujisay inuu sare usoo kacay.
Balse caawo fiidkii ayuu meel sare gaaray oo ah 55% ilaa 60% waana arin xaqiijisay in filimkan maalintiisa kowaad xisaabta labo godlaha gaari doono ama 10 Crore ka badan keeni doono waana bilaabasho aad u wanaagsan marka loo eego in filimkan fariintiisa tahay mid waaqici ah oo aan laheyn mada daalo dhameestiran.
Warar dheeraad ah waxay sheegayaan in filimkan magaalooyinka waa weyn sida Mumbai, Delhi, Hyderabad, Bengaluru iyo Kolkata waxaana muuqato maanta oo Jimco ah oo maalin shaqo ah haddii uu sare u kac sameeyay in Sabti iyo Axad reer magaalka siweyn u daawan doonaan filimkan fariintiisa la wada amaanayo.
Filimka Super 30 waxaa caawinayo in 3200 ilaa 3300 tiyaatar la saaray sidaa darteed dhamaan aflaanta kale ee tiyaatarada horey u sarnaayeen sida Kabir Singh iyo Article 15 waa lagu yareeyay tiyaatarada waana arin u wanaagsan Hrithik Roshan filimkiisa.
Previous articleRasmi: Article 15 todobaadkiisa labaad ganacsiga uu sameeyay & Spiderman – Far From Home todobaadkiisa kowaad
Next articleKangana iyo walaasheed oo diideen inay saxaafada raali galiyaan Akshay 3 filim waa weyn ayaa u diyaarsan: